» कम्प्युटर वा ल्यापटपबाट जिमेल आईडी बनाउने तरिका (भिडियो सहित)
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०४:४६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १७ जेठ । कुनै समयमा ईमेल भन्ने बित्तिकै याहुको वर्चश्व थियो । आउट लुक र हटमेलको पनि आफ्नै स्थान थियो तर अहिले संसारका धेरैजसो स्थानमा जिमेलले यी सबै माध्यमलाई विस्थापित गरेको छ । गुगलको तिव्र विकाससँगै गुगल मेल अर्थात जिमेललाई अहिले अफिसमा काम गर्नेदेखि लिएर सर्वसाधारणसम्मले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सबैको पहुँचमा पुराउनका लागि कम्पनीले विभिन्न फिचर समेत जिमेलसँगै जोडेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा गुगलका सबै आईडीलाई अहिले जिमेलमै जोडिएको छ । जिमेल आईडीले गुगलका लगभग सबै सेवालाई जोड्छ ।
यसैबेला जिमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न नयाँ प्रयोगकर्ता वा भर्खरै इन्टरनेट सिक्दै गरेका विद्यार्थीहरुका लागि उब्जन सक्छ । यसअघिको भिडियोमा हामीले मोबाईलबाट जिमेल आईडी बनाउने तरिकाका बारेमा भिडियो बनाएका थियौँ । यहाँ हामीले कम्प्युटर डेस्कटप र ल्यापटपबाट जिमेल आईडी बनाउने तरिकाका बारेमा भिडियो निर्माण गरेका छौँ । हेरौँ यो भिडियो । भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । हेरौँ जिमेल बनाउने तरिकाको भिडियो–
कम्प्युटर वा ल्यापटपबाट गुगल आईडी बनाउनका लागि तपाईको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा ईन्स्टल गरिएको गुगल क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, ईन्टरनेट वा अन्य ब्राउजरमा गएर जिमेल आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईको कुनै ब्राउजरमा जानुहोस् र एड्रेस बारमा (वेबसाईटको युआरएल ठेगाना टाईप गर्ने ठाउँमा) www.gmail.com टाईप गर्नुहोस् ।
त्यसपछि खुलेको जिमेलको बक्समा Create An Account मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईले First Name भन्ने ठाउँमा तपाईको नाम राख्नुहोस् र Last Name भन्ने ठाउँमा तपाईले आफ्नो थर लेख्नुहोस् । सकेसम्म तपाईँले आफ्नै वास्तविक नाम राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । किन कि यसो गर्दा तपाईको आईडीहरु सुरक्षित रहन्छन् र पछि केही समस्या आएमा समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसपछि User Name मा तपाईले राख्न चाहेको ईमेल आईडी राख्नुहोस् । भिडियोमा देखाएजस्तै गरी तपाईले त्यहाँ जिमेल आईडी छान्न सक्नुहुन्छ । जिमेल आईडी राख्ने ठाउँमा पहिला नै जिमेल डटकम पछाडि दिइएको हुन्छ त्यसैले जिमेल डटकमभन्दा अगाडिको मात्र आईडी तपाईले राख्नुभए हुन्छ । जिमेल डटकम हानिरहनुपर्दैन । यदि तपाईले लेख्नुभएको आईडी कसैले लिइएसकेको छ भने तपाईले त्यहाँ रातो देखाउँछ र त्यो आईडी अरु कसैले लिईसकेको भन्ने अप्सन आउँछ । अनि त्यस्तो अप्सनमा आउँदा तपाईले राख्नुभएको नामसँग मिल्दोजुल्दो कुनै उपलब्ध हुने र बनाउन मिल्ने आईडी पनि देखाउँछ । त्यसमा तपाईले कुनै छान्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा त्या नछानिकन तपाईले राख्नचाहानु भएको आईडीमा कुनै अंक थपेर वा अक्षर थपेर तपाईले नयाँ आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसपछि Password भन्ने अप्सन आउँछ र Confirm भन्ने अप्सन आउँछ । तपाईँले त्यहाँ याद गर्नुभयो भने कम्तिमा पनि पासवर्ड ८ अक्षर वा अंकको हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यहाँ तपाईले सम्झने तर अरुले अन्दाज गर्न नसकिने खालको पासवर्ड राख्नुहोस् । किन कि तपाईको पासवर्ड अरुले थाहा पायो भने त्यो असुरक्षित हुन्छ । त्यसैले कसैलाई पनि आफ्नो पासवर्ड नबताउनुहोस् । तपाईले आफ्नो पासवर्डमा आफ्नो नाममात्रै, जन्म मिति, वा अन्य विशेष मितिहरु मात्रै नराख्नुहोस् । बरु तपाईको नाम राख्नुभयो अथवा अरु शब्द राख्नुभयो भने त्यसमा कुनै अक्षर क्यापिटल, स्मल वा कुनै अंक थप्नुहोस् । साथै स्पेशल क्यारेक्टरहरु जस्ते एड द रेट, ह्यास, ह्वाट, कमा लगायतका अक्षरहरु पनि थप्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईको पासवर्ड निकै बलियो र सुरक्षित हुन्छ ।
ती दुबै ठाउँमा तपाईले राख्न चाहानुभएको एउटै पासवर्ड राख्नुहोस् । त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् । यसरी पासवर्ड राखेर नेक्स्ट गरेपछि तपाईको फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ । त्यसमा तपाईको फोन नम्बर राखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा गुगलको ६ वटा अंकको पासवर्ड तपाईको एसएमएसमा आउँछ र त्यसलाई ईन्टर भेरिफीकेसन कोड भन्ने अप्सन आएको ठाउँमा हानेर भेरिफाई मा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गरेपछि तपाईको मोबाईल नम्बर भेरिफाई हुन्छ । तपाई मोबाईल नम्बर राख्न चाहानुहुन्न भने स्कीपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म तपाईले फोन नम्बर राखेको राम्रो हो । यसो गर्दा कुनै दिन तपाईले पासवर्ड बिर्सनुभयो भने फोनबाट अनलक गर्न सकिन्छ । साथै कहिलेकाँही स्किप गर्ने अप्सन आउँदैन त्यसैले तपाईले फोन नम्बर राख्नैपर्ने हुन्छ । यदि फोन नम्बर राखेर नेक्स्ट गर्दा एसएमएसमा कोड आएन भने Call Instead मा फोन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा तपाईलाई गुगलबाट फोन आउँछ र त्यसमा तपाईलाई गुगलले २ पटक कोड भनिदिन्छ । त्यो ६ नम्बरको कोड सुनेर टिपेर तपाईले कोड हान्ने ठाउँमा हानेर भेरिफाई गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि तपाईले ] Recovery Email Address भन्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईले रिकभरी ईमेलका रुपमा तपाईको कुनै सँधै चलाउने आईडी राख्नसक्नुहुन्छ जसको कारण जिमेल आईडीमा समस्या आउँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर तपाई नयाँ आईडी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ केही नराख्दा पनि हुन्छ । त्यसपछि जन्म मिति र लिंग लेख्नुहोस् । यसमा पनि तपाईले सही जन्म मिति राख्नुहोस् र लिंग लेख्ने ठाउँमा महिला वा पुरुष मध्ये कुनै छान्न वा कुनै नराख्ने भए Rather Not Say मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ । जन्म मिति राख्दा तपाई उमेरलाई ईस्वी सम्वतमा परिवर्तन गरेर वर्ष, महिना र गते क्रमश लेख्नुपर्छ । यदि तपाईलाई मिति परिवर्तन गर्न आउँदैन भने नेपाली पात्रोमा हेर्न वा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि Next मा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईले तपाईको मोबाईल नम्बरमा विभिन्न सेवा लिनसकिन्छ भन्ने म्यासेज देख्नुहुन्छ तर त्यसलाई तपाईले भिडियोमा देखाइएजस्तै गरी स्कीप गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसपछि गुगलको प्राईभेसी र टर्मको बारेमा डाईलग बक्स आउँछ । त्यसमा तपाईले तल क्I Agree मा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईलाई गुगलबाट वेलकम सहितको डाईलग बक्स खुल्छ । त्यहाँ तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तपाईले Choose A View भन्ने अप्सन आउँछ । त्यसमा तपाईले Default मा क्लिक गरेर OK मा क्लिक गर्नुहोस् । यसरी तपाईको आईडी बन्यो तपाईले अब यसलाई सिधा चलाउन वा लगआउट गरेर अब तपाईँले जिमेल डटकममा गएर भर्खरै बनाएको आईडी र पासवर्ड हालेर लग अन गर्न सक्नुहुन्छ । जिमेललाई तपाई ईमेल पठाउन मात्र नभई युट्युब च्यानल बनाउन तथा विभिन्न अन्य सेवाहरु प्रयोगका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
चन्द्रमा विषयमा हामी मानिस जाति मात्र होईन प्रकृतिका अन्य सृष्टिले पनि चासो राख्ने गर्छन् । चन्द्रमाकै गतिका कारण पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन लगायतका प्रक्रियाहरु सञ्चालन हुन्छन् । संसारका कतिपय पात्रोहरु आज पनि चन्द्रमाकै गतिका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । कतिपयले चन्द्रमालाई कुरुप रुपमा चित्रण गर्छन् भने कतिपयले यसको सुन्दरताको पनि विष्लेषण गर्छन् । आफ्नो प्रेमिकालाई अधिकांश प्रेमीहरुले जुनसँग तुलना गर्छन् चाहे त्यो सुन्दरताको आधारमा होस् या प्राप्तिका आधारमा होस् । चन्द्रमा पृथ्वीको एक उपग्रह हो जुन पृथ्वीभन्दा ३ लाख ८४ हजार ४ सय किलोमिटर टाढा छ । निल आर्मस्ट्रंगले सन् १९६९ को जुलाई २१ मा चन्द्रमामा पहिलोपटक पाइला टेकेका थिए । सन् १९७२ मा यूजिन सेरननले पनि चन्द्रमामा पाइला टेके । उनी नै अहिलेसम्म चन्द्रमामा पुग्ने अन्तिम यात्री हुन् । त्यसयता चन्द्रमामा मानिसलाई पठाइएको छैन । यद्यपि, लूनार रिकनिसेन्स अर्बिटर नामक स्याटेलाइटका माध्यमबाट नासाले चन्द्रमाको गतिविधि निगरानी गर्ने गर्दछ ।
ट्वीटर माईक्रो ब्लगिङ साईटहरुमध्ये लोकप्रिय साईट हो तर पनि यसले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आईरहेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न समस्यामा गुज्रँदै र थप सुधार गर्दै आएको ट्वीटरले ६ महिनाको अवधिमा नै १ लाख ६० हजारभन्दा बढी ट्वीटर अकाउन्टहरु बन्द गरिदिएको छ । हुन त आफ्नो प्रयोगकर्ताका अकाउन्ट बन्द गर्दा यसको घाटा प्रत्यक्ष रुपमा ट्वीटरमा पर्छ तर पनि विविध कारणले गर्दा ट्वीटरले गत वर्षको जुलाईदेखि डिसेम्बर सम्ममा यति ठूलो संख्यामा अकाउन्ट बन्द गराएको हो । बन्द गरिएका ती ट्वीटर अकाउन्टहरुले आतंकवादलाई बढावा दिएको र आतंकवादी संगठनहरुद्वारा आफ्ना गतिविधिको प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको पाइएपछि ट्वीटर यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । ट्वीटरको सुधारका लागि शून्य सहनशीलता नीति लागु गरेको ट्वीटरले उक्त अवधिमा १ लाख ६६ हजार ५१३ अकाउन्ट बन्द गरेको हो । अधिकारीहरुका अनुसार निलम्बन गरिएका अकाउन्ट मध्ये ९१ प्रतिशत अकाउन्टका सामाग्रीहरु आपत्तिजनक रहेको तथ्य ट्वीटरको आन्तरिक प्राविधिक टूल्सले पत्ता लगाएको थियो ।
जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन खेल्न समेत सघाउ पुराउने सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगका कारण कयौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै एउटा घटनाका कारण अहिले अनलाईन मिडिया तातिएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार चर्चित फोटो शेयरिङ एप इन्स्टाग्राममा मर्ने कि नमर्ने ? भन्ने विषयमा मत सर्वेक्षण गरेर एकजना किशोरीले आत्महत्या गरेकी छिन् । मलेसियाकी १६ वर्षीया ती किशोरीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्ना फलोअर्ससँग आफु मर्दा ठिक हुन्छ कि बाँच्दा ठिक हुन्छ भन्दै मत सर्वेक्षण गरेपश्चात आत्माहत्या गरेको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । अचम्मको कुरा त के भने उनका फलोअर्समध्ये मत सर्वेक्षणमा भाग लिएका ६९ प्रतिशत फलोअर्सले उनलाई मर्दा ठिक हुन्छ भन्ने मत दिए । मलेसियाको सारावाक राज्य पुलिसका अनुसार ती किशोरीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा राखेको पोलमा यस्तो लेखेकी थिईन्–‘निकै महत्वपूर्ण, छनोटमा सहयोग गर्नुहोस्, मरण÷जीवन ।’ उनको त्यो पोलमा भोट गर्नेमध्ये ६९ प्रतिशतले मरण अर्थात डेथ अप्सनमा भोट गरेका थिए । त्यो उनलाई सह्य भएन र आत्महत्याको बाटो रोजिन् ।
जीवन सिग्देल र पवित्रा मगरको कडा दोहोरी भिडन्त
दोहोरी च्याम्पियनमा रुवाबासी
मिना वा संगीना, कुन टिमको होला जित ?
जीवन वा बसन्त कसले जित्ला दोहोरी भिडन्त ?